मंगलबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति छ ? « Nepal Bahas
मंगलबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति छ ?
प्रकाशित मिति : २० पुष २०७८, मंगलवार १३:२७
२० पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम ११८रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्री दर ११९ रुपैयाँ १२ पैसा कायम गरेको छ ।
युरोपियन यूरो एकको खरिद दर १३४रुपैयाँ ५९पैसा र बिक्री दर १३५ रुपैयाँ २७ पैसा छ । यूके पाउन्ड स्टलिङ एकको खरिद दर १६० रुपैयाँ २५पैसा र बिक्री दर १६१ रुपैयाँ ०६ पैसा छ । स्वीस फ्रेङ्क एकको खरिद दर १२९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्री दर १३० रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर ८६ रुपैयाँ र बिक्री दर ८६ रुपैयाँ ४३ पैसा छ । क्यानेडियन डलर एकको खरिद दर ९३ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ भने बिक्री दर ९३ रुपैयाँ ९७ पैसा छ ।
जापानी येन १० को खरिद दर नेपाली १० रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्री दर १० रुपैयाँ ३५ पैसा छ भने चिनियाँ यूआन एकको खरिद दर १८ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्री दर १८ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
साउदी अरबियन रियाल एकको खरिर दर ३१ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्री दर ३१ रुपैयाँ ७३ पैसा छ भने कतारी रियाल एकको खरिद दर ३२ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्री दर ३२ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचीमा उल्लेख छ ।
मलेसियन रिंगिट एकको खरिद दर २८ रुपैयाँ ४१ पैसा छ भने बिक्री दर २८ रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ भने कोरियन वन १०० को खरिद दर ९ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्री दर ९ रुपैयाँ ९८ पैसा कायम भएको छ ।